Immisa codsi oo macluumaad ah oo ka yimid Dowladda Spain ayaa diiday Apple? | Wararka IPhone
Apple wuxuu kamid yahay shirkadaha ugu gaashaaman seguridad iyo asturnaanta adeegsadayaasheeda. Waxay ku bixisay malaayiin doolar ololeyaal si loo muujiyo in badbaadada isticmaaleyaasheeda la damaanad qaaday iyada oo ay ugu wacan tahay tirada badan ee kheyraadka laga heli karo faraha. Laakiin mararka qaarkood Apple waa inay macluumaad siiso dawladaha dhammaan waddamada adduunka. Mararka qaar codsiyadaasi way dhacaan, laakiin waqtiyo kale way guuleystaan ​​oo xogta waxaa lagu wareejiyaa hay'adaha codsaday. Warbixinadan sirta ah ayaa la daabacay sanadkiiba mar waxaa qaata Apple waxaana jira warbixino badan sida ay jiraan dalal lagu iibiyo aaladaha Big Apple. Ma rabtaa inaad ogaato codsiyada xogta ee Dowladda Spain?
35% codsiyada Dowlada Spain waa la joojiyay
Apple waxaa ka go'an inay noqoto mid daahfuran oo ku saabsan codsiyada dowladda ee macluumaadka macaamiisha iyo sida aan uga jawaabno. Waxaan daabacnaa Warbixinta Hufnaanta (Transparency Report) laba jeer sanadkii taasoo muujineysa tirada codsiyada dowladda ee macluumaadka macaamiisha ee Apple ay ka hesho adduunka.
Dawladda iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay waa inay u hoggaansamaan sharciyada iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo markay ka codsanayaan Apple macluumaadka.
Dawladaha adduunku fursad ayey u leeyihiin weydiiso macluumaad xasaasi ah macaamiisha Apple, ilaa iyo inta ay u hogaansamayaan qawaaniinta, tilmaamaha iyo sharciyada dalkaaga iyo gaar ahaan wakaaladahaaga. Waxaa muhiim ah in la xoojiyo tan tan iyo markii ay ka yimaadeen guriga waxay nagu soo wargelinayaan in Apple "ay ka go'an tahay" inay si daah furnaan leh ula socoto dawladahan. Waa wax macquul ah in dowlad ay rabto inay codsato macluumaad kiisaska sida dambiyada, dilalka ama dhaca.
Warbixinta la heli karo waqtigan waa tan Luulyo-Diseembar 2018, Laakiin maalmo yar gudahood warbixintii ugu horreysay ee 2019 ayaa soo bixi doonta, taas oo socon doonta laga bilaabo Janaayo ilaa Juun. Labadan warbixinood ee sanadlaha ah waxay kordhiyaan hufnaanta ay Apple u doodayso. Haddii aan falanqeyno xogta ah Dowladda Spain, waxaan aragnaa inay isdiiwaangaliyeen 2413 codsi macluumaad kuwaas oo 1736 ay ahaayeen qalab, 629 aqoonsi maaliyadeed iyo 48 arrimo la xiriira Aqoonsigaaga Apple. Kuwani waa noocyada codsiyada la samayn karo:
Qalab: raadso xogta macmiilka ee laxirta qalabka aqoonsiga sida nambarka taxan ama lambarka IMEI
Aqoonsiga maaliyadeed: wuxuu raadiyaa xogta macaamiisha ee la xiriirta aqoonsiga maaliyadeed, sida kaararka amaahda ama hadiyadaha
Sharciga: wuxuu raadiyaa xogta macaamiisha ee laxiriira aqoonsiga akoonka, sida Apple ID ama cinwaanka emaylka
Degdeg ah: ka raadi dhammaan macaamiisha arrin degdeg ah
Haddii aan falanqeyno inta codsi ee ay xallisay Apple oo siineysa dukumiintiyada la soo bandhigay, waxaan ka heli karnaa a 65% jawaabo wanaagsan. Taa baddalkeeda, inta soo hartay 35% ayaa ahaa codsiyo xog ah oo laga diiday Cupertino kadib talo sharci iyo fahamka kiiska. Noocyada codsiyada, 80% codsiyada qalabka waa la xaliyay, 71% ee codsiyada aqoonsiga maaliyadeed, koontada 49% iyo 100% xaalada deg degga ah (kiiskan waxaa jiray 0).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Imisa codsi oo macluumaad ah oo ka yimid isticmaaleyaasha Apple ee Dowladda Spain ayaa la diiday?
Sida loo isticmaalo 3D Touch menus-ka iPadOS